ရုံတင်မယ့်ကားတွေများတာကြောင့် မျက်စိမနောက်ဖို့ တောင်းပန်လိုက်တဲ့ နေတိုး - Cele Connections
ရုံတင်မယ့်ကားတွေများတာကြောင့် မျက်စိမနောက်ဖို့ တောင်းပန်လိုက်တဲ့ နေတိုး
admin | 04/11/2019 | Celebrity | No Comments
နေတိုးကတော့ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကရဲ့ နိုင်ငံကျော် ထိပ်တန်းမင်းသားတစ်လက်အဖြစ် အောင်မြင်ကျော်ကြားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အနုပညာအလုပ်ကို ချစ်မြတ်နိုးရူးသွပ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် မင်းသားတစ်ယောက်အဖြစ်သာမက တေးသီချင်းတွေကိုလည်း ရံဖန်ရံခါသီဆိုလေ့ရှိသလို ပန်းချီဆွဲလည်းသိပ်တော်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ နေတိုးပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကလည်း တစ်ကားဆို တစ်ကားဆိုသလောက် ပရိသတ်ရင်ထဲထိစေတာမို့ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ပရိသတ်တွေက သူ့ကို အမြဲအားပေးဝန်းရံကြတာပါ။ နေတိုးက မကြာခင်ရုံတင်ပြသတော့မယ့် ကလေးသူငယ်တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ယနေ့ခေတ်အခြေအနေကို ထင်ဟပ်ပြသထားတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်တဲ့ “သေတ္တာအမှတ်(၈၈)”မှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါသေးတယ်။
ပရိသတ်အားပေးမှုကို နှစ်ပေါင်းများစွာကြာသည့်တိုင်အောင် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တဲ့ နေတိုးဟာ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်မှာလည်း သူ့ရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို ပရိသတ်တွေဆီ ချပြလေ့ရှိသူပါ။ နေတိုးဟာ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲအောင်မြင်မှုတွေနဲ့အတူ လတ်တလောရုံတင်မယ့် ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာလည်း သူပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားတွေက အများအပြားပါဝင်နေပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း “အခုတလောရုံတင်ပြသမယ့် ကားတွေများတော့ အမှတ်တရဓာတ်ပုံတွေကလည်း များပြီပေါ့။ ပို့စ်တွေ ဓာတ်ပုံတွေတင်တာများသွားလို့ မျက်စိနောက်တယ်ဆိုလည်း အားမနာနဲ့ comment မှာ ပြောသာပြောခဲ့ပါ။ ပရိသတ်အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်”….လို့ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာထက်ကနေ မျှဝေခဲ့ပါသေးတယ်။ ပရိသတ်တွေအပေါ် အလေးထားဆက်ဆံတတ်တဲ့ နေတိုးကို သူ့ပရိသတ်တွေကတော့ အချစ်တွေပိုတိုးလို့နေကြပါပြီ။
နေတိုးကို အမြဲအားပေးဝန်းရံနေကြတဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးက ပရိသတ်ထုကြီးကတော့ သူ့ရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှု အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေကို ဒီထက်မက တင်ပေးစေချင်ကြောင်း မှတ်ချက်တွေပေးခဲ့ကြပါတယ်။ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးကရော မင်းသားချော နေတိုးရဲ့ မကြာခင်ထွက်ရှိလာတော့မယ့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကို အားပေးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြပြီလား ????
Source – Nay Toe
ရုံတငျမယျ့ကားတှမြေားတာကွောငျ့ မကျြစိမနောကျဖို့ တောငျးပနျလိုကျတဲ့ နတေိုး
နတေိုးကတော့ မွနျမာ့ရုပျရှငျလောကရဲ့ နိုငျငံကြျော ထိပျတနျးမငျးသားတဈလကျအဖွဈ အောငျမွငျကြျောကွားသူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ သူဟာ အနုပညာအလုပျကို ခဈြမွတျနိုးရူးသှပျသူတဈယောကျဖွဈတာကွောငျ့ မငျးသားတဈယောကျအဖွဈသာမက တေးသီခငျြးတှကေိုလညျး ရံဖနျရံခါသီဆိုလရှေိ့သလို ပနျးခြီဆှဲလညျးသိပျတျောသူ တဈယောကျဖွဈပါတယျ။ နတေိုးပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားတှကေလညျး တဈကားဆို တဈကားဆိုသလောကျ ပရိသတျရငျထဲထိစတောမို့ တဈနိုငျငံလုံးအတိုငျးအတာနဲ့ ပရိသတျတှကေ သူ့ကို အမွဲအားပေးဝနျးရံကွတာပါ။ နတေိုးက မကွာခငျရုံတငျပွသတော့မယျ့ ကလေးသူငယျတှနေဲ့ ပတျသကျတဲ့ ယနခေ့တျေအခွအေနကေို ထငျဟပျပွသထားတဲ့ ဇာတျကားတဈကားဖွဈတဲ့ “သတ်ေတာအမှတျ(၈၈)”မှာလညျး ပါဝငျသရုပျဆောငျထားပါသေးတယျ။
ပရိသတျအားပေးမှုကို နှဈပေါငျးမြားစှာကွာသညျ့တိုငျအောငျ ထိနျးသိမျးထားနိုငျတဲ့ နတေိုးဟာ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာထကျမှာလညျး သူ့ရဲ့အနုပညာလှုပျရှားမှုတှကေို ပရိသတျတှဆေီ ခပြွလရှေိ့သူပါ။ နတေိုးဟာ ဒိတျဒိတျကွဲအောငျမွငျမှုတှနေဲ့အတူ လတျတလောရုံတငျမယျ့ ဇာတျကားကွီးတှမှောလညျး သူပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့ ဇာတျကားတှကေ အမြားအပွားပါဝငျနပေါတယျ။ အဲဒါနဲ့ပတျသကျပွီးတော့လညျး “အခုတလောရုံတငျပွသမယျ့ ကားတှမြေားတော့ အမှတျတရဓာတျပုံတှကေလညျး မြားပွီပေါ့။ ပို့ဈတှေ ဓာတျပုံတှတေငျတာမြားသှားလို့ မကျြစိနောကျတယျဆိုလညျး အားမနာနဲ့ comment မှာ ပွောသာပွောခဲ့ပါ။ ပရိသတျအားလုံးကို ကြေးဇူးတငျပါတယျ”….လို့ သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာထကျကနေ မြှဝခေဲ့ပါသေးတယျ။ ပရိသတျတှအေပျေါ အလေးထားဆကျဆံတတျတဲ့ နတေိုးကို သူ့ပရိသတျတှကေတော့ အခဈြတှပေိုတိုးလို့နကွေပါပွီ။
နတေိုးကို အမွဲအားပေးဝနျးရံနကွေတဲ့ တဈနိုငျငံလုံးက ပရိသတျထုကွီးကတော့ သူ့ရဲ့အနုပညာလှုပျရှားမှု အမှတျတရပုံရိပျလေးတှကေို ဒီထကျမက တငျပေးစခေငျြကွောငျး မှတျခကျြတှပေေးခဲ့ကွပါတယျ။ Cele Connections ပရိသတျကွီးကရော မငျးသားခြော နတေိုးရဲ့ မကွာခငျထှကျရှိလာတော့မယျ့ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှကေို အားပေးဖို့အဆငျသငျ့ဖွဈနကွေပွီလား ????
“ကြော်ငြာရိုက်၇င်း ရင်းနှီးခဲ့တဲ့ ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံသရုပ်ဆောင် အကိုအတွက် လိုအပ်သမျှ ကူညီပေးခဲ့တဲ့ဖြူဖြူထွေး”
“ မမတှကေို စကားလုံးလေးတှနေဲ့ ခြုပျလိုကျတဲ့ အုပျစိုးခနျ့
သင်ဇာဝင့်ကျော်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး စနောက်တဲ့ ပရိသတ်ကို မတရားဘူးလို့ ကျီစယ်ပြောဆိုခဲ့တဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်